Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. अव्यवस्थित बजार नियन्त्रण गर्न इलाममा सिटी मार्ट निर्माण हुँदै – Emountain TV
अव्यवस्थित बजार नियन्त्रण गर्न इलाममा सिटी मार्ट निर्माण हुँदै
इलाम, २३ असोज । इलामका ब्यापारी तथा उपभोक्ताहरुलाई सहज होस भनेर इलाम वजारमा सिटी मार्ट निर्माण भइरहेको छ । यो सिटीमार्ट निर्माण भएपछि जिल्लावासीलाई बजारको नयाँ अनुभव हुने र किनमेलका लागि सहज हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले १ करोड ३५ लाख लगानी गरेको सिटी मार्टमा बाँकी रकम नगरपालिका र स्थानीय व्यापारीको लगानी रहने छ ।
इलाम बजारको अव्यवस्थित वजारलाई नियन्त्रण गर्न र उपभोक्तालाई किनमेल सहज बनाउन प्रदेश सरकार र इलाम नगरपालिकाको पहलमा सिटी मार्ट निर्माण भइरहेको छ । देशकै दोस्रो सफा सहर घोषित इलाम वजारलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सिटी मार्टले सहयोग गर्ने अपेक्षा सहित मार्ट निर्माण गर्न थालीएको हो ।
अहिले निर्माणको काम आधा भन्दा बढी भइसकेको छ । पाँच तल्ले सीटी मार्ट बनाउन प्रदेश सरकारले एक करोड ३५ लाख लगानी गरेकोे छ । अन्य रकम इलाम नगरपालिका र स्थानिय व्यापारीहरुको लगानी रहने छ ।
सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा निर्माण भइरहेको सिटी मार्ट आगामी बैशाख सम्ममा सम्पन्न हुने निर्माण व्यवसायीको दावीे छ । पाँच तले भवनमा २ वटा लिफ्ट सहित ९१ वटा पसल रहने छन् । अपाङ्ग मैत्री भवनमा ३८ वटा सी सी क्यामेरा जडान गरिने छ ।
नौ करोड ८० लाख लागतमा निर्माण भइरहेको सिटी मार्ट निर्माणपछि इलाम बजारमा अव्यवस्थित रुपमा संचालनमा रहेका कपडा पसल, मासु पसल र तरकारी पसल व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको छ । सिटी मार्ट भवन निर्माणमा स्थानीय खुद्रा पसलेहरुले समेत लगानी गरेका छन् ।